Ahoana ny fomba fampandehanana fampiharana 32-Bit amin'ny Fedora 64-Bit | Avy amin'ny Linux
Salama namana, amin'ity indray mitoraka ity dia tiako haseho anao ny fomba fametrahana tranomboky mba hitantanana programa 32-bit amin'ny rafitra 64-bit raha manontany tena ianao hoe inona no ilana azy ao amin'ny XAMPP. Izay mangataka amintsika famakiam-boky hiroso amin'ny rafitra 64-bit. Mandehana miasa.
Ny hany zavatra tsy maintsy hataontsika dia ny mampiditra ireto kaody manaraka ireto ao amin'ny Terminal.
Apetraho ny teny miafinao
Para Debian azoko ireo kaody ireo.
Ary vonona miaraka amin'izany ny zava-drehetra. Vintana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana no mihazakazaka fampiharana 32 bit amin'ny 64 Bit Fedora
tsara fa tsy hita koa
sudo dpkg –add-maritrano i386
Ampio ny repo 32-bit sy voila iray manontolo, azonao atao ny mihazakazaka fampiharana 32-bit amin'ny kernel 64-bit.
[fampandrenesana] Ny rindranasa 32-bit tsy afaka miara-miaina amin'ny 64-bit, noho izany ny fiezahana hametraka iray dia hamafana ny iray hafa [/ fampandrenesana]
Ity farany dia tsy olana satria vondronà fampiharana fotsiny no ampiasainay toy ny mpamily winmodems izay mihazakazaka 32 bit fotsiny, sns. Amin'ity tranga ity dia ilaina ny mametraka ny lohan-kernel 32-bit izay miara-miaina amin'ireo 64-bit.
Manome ahy tsia. Dpkg dia tsy mifanaraka afa-tsy amin'ny Debian sy ny derivatives.
Alohan'ny hivarotana ny moto sy hamitahana ny mpiasa dia mila mampahafantatra bebe kokoa ny tenantsika isika.
Medaqueno dia hoy izy:
Raha namaky zavatra hafa ankoatry ny lohateny ianao, dia ho hitanao fa miteny hoe:
«Ho an'i Debian dia nahazo ireto kaody ireto aho.
sudo apt-mahazo mametraka ia32-libs »
Izay indrindra no tondroin'i BishopWolf etsy ambony.
Toy izany koa no tokony ampiharina amin'ny tantaranao manokana.
Mamaly an'i Medaqueno
Heveriko fa tsy maintsy nofaritako fa mampiasa Debian aho ary ny hevitro teo aloha dia natao ho an'ireo mpampiasa Debian sy derivative. Heveriko fa efa namaly an'io izy ireo
Raha ho ahy dia mora kokoa izany, apetrako fotsiny ilay kinova 32-bit ary hamaha ny fiankinan-doha ho azy i yum (ao anatin'izany ireo tranomboky 32-bit)
Eny, saingy, manana rafitra x86 [32Bits] ianao, ny dikany dia ny fananana fototra x64 ary avy eo mampandeha fampiharana 32-bit. Mety hanana 32Bits angamba ianao amin'ny Kernel PAE hahazoana fankatoavana HW bebe kokoa raha toa ka manana PC maoderina ianao.
Amin'ny ankapobeny, raha ny fahazoako ny x64 dia manome pototra bebe kokoa noho ny 32Bits ary ahitsiho aho raha diso aho!
PS: MRGERSON, Misaotra amin'ny tendrony!
Mety, hijanona ao amin'ny F17 ve ianao mandra-pahatapitr'izy ireo manohana azy sa tsy tianao ilay kinova vaovao, F18 ankehitriny?
Eny, mety ho potika lehibe kokoa izy io, ny fahafaha-miasa manompo anao fotsiny raha toa ianao ka mitantana angona lehibe (filalaovana, mpizara, endrika sary sns), raha toa ianao ka mizaha, manao ny fandaharana, mandefa avy amin'ny Linux, sns. 32 dia ampy ho anao, ary ianao Mamonjy fanjifana angovo betsaka ianao ary misy fiantraikany amin'ny faharetan'ny bateria ao anaty solosaina finday.
Ny maritrano amin'ny lojika dia fantatro fa ny faharetan'ny bateria dia miankina amin'io satria arakaraka ny maha avo ny fanjifana, ny habetsaky ny entana ho an'ny PC, saingy, izaho manokana dia nampiasa ny maritrano roa ary amin'ny masoko manokana ny bateria dia maharitra kely kokoa noho ny mampiasa Windows, Izany, ao amin'ny Windows dia mandeha amin'ny jiro LED aho mba hilalao bebe kokoa amin'ny lalao sasany amin'ny AEO II sy ny hafa ary tsapako fa maharitra kokoa ny bateria noho ny fampiasana Linux.
Eny, amin'ny ankapobeny dia mampiasa linux na rafitra roa ho an'ny sehatry ny fandaharana sy ny hafa aho ..
Ny fihemoran'ny Kernel amin'ny resaka fiainana bateria dia matetika matetika ao amin'ny Linux ary raha ny mahazo anay dia toa tsy omena lanja ny tokony izy ireo. Tsaroako fa ny famerenam-bidy niavaka voalohany dia notaterina tao amin'ny kernel 2.6.38 raha tadidiko tsara ary namboarina -amin'ny teôria- amin'ny andiany 3.2! fa isaky ny kinova vaovao dia tsikaritro ny fihenan'ny bateriko. Tsy miraharaha an'izany intsony aho, satria matetika no ampiasako isaky ny fiavian'i Kristy. Ary tsy ny batterie ihany, fa mahazatra ihany koa ny mijery mari-pana avo kokoa amin'ny processeur, kapila ary sary, miaraka amin'ny valiny mety haterak'izy ireo amin'ny solosaintsika.
Amin'ny maha-mpampiasa tsy teknika ahy, ny hany hany zavatra azoko omena dia ny tatitra momba ny bibikely… .amin'ny fanantenana - tsy dia avo loatra- ka ho voavaha izy ireo. Io no ananan'ny rafitra penguin.
st0rmt4il, hijanona aho mandra-pahatapitry ny fanohanana fa kamo fotsiny, tsy mbola nanandrana ny kinova 18 aho.
LOL .. Araka ny filazanao rangahy, antenaina ary noho ny fanamboarana F19 vaovao ary ataovy mahafinaritra ny mpametraka .. Ho an'ny ambiny dia hitako tsara 😀
Aza manavakavaka izahay arch:]
"Ho an'i Debian dia nahazo ireto kaody ireto aho."
Inona no azonao ireo kaody ireo!?
Lazao amiko, ny "kaody" azonao dia ny fisoratana anarana amin'ny OS feno na ny fiainana tsy manam-petra amin'ny lalao kely?
An-tsary: ​​FLISOL 2013